China Mugadziri Akasarudzika LED Sign Chiedza Girazi Neon Chiratidzo cheShop Bar Chitoro Kumba Kushongedza Vagadziri uye Vatengesi | PDL
Stainless Simbi 3d Signs Tsamba Kushambadzira Metal Si ...
Shop yakatungamira Sign Sign Outdoor Yakavhenekerwa Signage Pamberi Lit ...
New Style Style Stainless simbi Kwakaita Front Lit & Halo ...
Custom akatungamirira CNC Kucheka Goridhe Stainless simbi Backlit ...
Mugadziri Akasarudzika LED Sign Chiedza Girazi Neon Chiratidzo cheShop Bar Chitoro Kumba Kushongedza
1.Materials: Girazi Tube, Acrylic Backboard kana Metal pasherefu
2.Handmade uye Yemahara Sampuli inowanikwa
3.Production Nguva ndeye 3-4 Mazuva
4.Shipping Nguva ndeye 3-5 Mazuva
5.Safe Package: Bubble yeMukati uye Nhatu-ply Wooden Case
Saizi:Yakasarudzika, Yakagadzirwa nemaoko Yechokwadi Girazi Tube, ASI LED. Kana iwe uchida imwe saizi ndapota taura nesu, tinogona kusangana zvako zvakasiyana zvinodiwa nehukuru, ruvara, kana pateni. EXPRESS: Kutumira (DHL kana FedEx): 2 ~ 3 mazuva.
Ruvara:Sezvinoratidzwa mumufananidzo (Zviratidzo zvinonyanya kufadza kupfuura mifananidzo :). Kana iwe uchida vamwe vara, ndapota titumire iwo meseji.
Iyo inoshandura Inyore Voltage:100-240V. Chinhu chinouya nepaki iyo inokodzera nyika dzese. Kurema kwechiedza uye hakuzopisa zvakanyanya kana uchishandisa. Isu takapasa bvunzo dzakanaka tisati tazvitumira kunze, yakavakwa pane acrylic sign board pamwe ne-off-switch pane tambo yemagetsi, zviri nyore kutakurwa, kusungirirwa uye kudzorwa.
Kushanda:Iyo neon mwenje inogona kushandiswa semwenje mwenje, rusvingo art mwenje uye zvakare chikuru yakasarudzika chipo. Rakanaka kumahombekombe epabhawa yekurara yemitambo kamuri yemahotera chitoro garaji uye kushongedza kwezororo Ichowo chikuru chipo cheAnniversary, Birthday, Valentines kana Rudo chipo.
Kutsiva:All machubhu anogona kutsiviwa, dzimwe nguva machubhu aigona kutyoka panguva yekufambisa, ndapota titumirei mufananidzo kuratidza zvakaputsika zvikamu, isu tichagadzirisa nazvo mukati me24hrs uye kuronga kutumira iyo yekutsiva, iyo ichave iri pamutengo wedu. ONA: Rimwe gore mhando garandi neon zviratidzo, Neon zviratidzo zvigadzirwa nemaoko zvigadzirwa, kana risiri iro dambudziko rehunhu, isu hatisi kugamuchira kudzoka. Ndokumbirawo mugare nemutsa nekungwarira
Mashoko Kumberi: Girazi Tube
Rutivi: Girazi Tube
Mukati: LED isina mvura
Kudzoka: Acrylic / Metal Shelf
Saizi Yakasarudzika dhizaini
Ruvara Yakasarudzika kubva pane chati chati
Shanduko Kubuditsa: 5V uye 12V
Vhenekera Hight mwenje nemhando dzese dzeruvara maLED module
Chiedza Kunobva Akatungamira ma module / Akaburitswa akatungamira e LED / akaturika
Garandi Makore mana
Ukobvu Yakasarudzika dhizaini
Avhareji yehupenyu Kupfuura 35000hrs
Kugadziriswa CE, RoHs, UL
Kushanda Zvitoro / Chipatara / Makambani / mahotera / maresitorendi / nezvimwe.
Kavha Bubble mukati uye matatu-ply kesi yemapuranga kunze
Kubhadhara L / C, TT, PayPal, Western Union, Mari Gram, Escrow
Kutumirwa Nokutaura (DHL, FedEx, TNT, UPS nezvimwewo), 3-5days
Lead nguva Mazuva 3-5 paseti imwe
Mitemo yekubhadhara 30% dhipoziti uye 70% mwero mushure mekusimbisa mifananidzo
Pashure: Kupisa Kutengesa Yakasarudzika LED Neon Sign Wall Yakakwira LED Flex Neon Mwenje Kushambadzira Sign
Zvadaro: Yakasarudzika 3d Tsamba Chiedza Bhizinesi Kunze Kushambadzira Chiteshi LED Sign
Q1: Ndeipi garandi yezvigadzirwa zvako?
A1: Iyo garandi yeacrylic makore mashanu; Kune LED ndeye makore mana; yeiyo transformer makore matatu.
Q2: Chii chiri kushanda tembiricha?
A2: Kushanda tembiricha yakafara kubva -40 ° C kusvika 80 ° C.
Q3: Unogona kugadzira zvigadzirwa zvetsika, dhizaini uye tsamba?
A3: Ehe, Tinogona kugadzira zvimiro, magadzirirwo, marogo uye tsamba dzinodiwa nemutengi.
Q4: Ungawana sei mutengo wechigadzirwa changu?
A4: Unogona kutumira ruzivo rweyako dhizaini kune yedu email kana kubata maneja wezvekutengesa wepamhepo
A4: .Yese emitengo iri pamusoro inoverengerwa nepanzvimbo yakatambanuka; kana kureba uye upamhi zvichidarika 1meter, ipapo zvichaverengerwa nekwere mita
Q5: ini handina kudhirowa, unogona kundigadzirira ini?
A5: Ehe, tinogona kuzvigadzira iwe zvinoenderana nemhedzisiro yako iwe yaunoda kuti ive
Q6: Ndeipi inotungamira-nguva yeavhareji odha? Ndeipi nguva yekutumira?
A6: Iyo inotungamira-nguva yeavhareji odhita mazuva 3-5. Uye mazuva 3-5 nekutaura; Mazuva mashanu kusvika matanhatu neMhepo yekudhinda.; Mazuva 25-35 neGungwa.
Q7: Chiratidzo chinokwana kumagetsi emuno here?
A7: Ndokumbira usimbise zororo, iyo transformer ichagoverwa ipapo.
Q8: Ndingaite sei kuti chiratidzo changu chiiswe?
A8: Iyo 1: 1 gwaro rekumisikidza raizotumirwa nechigadzirwa chako.
Q9: Ndeupi rudzi rwekutakura wauri kushandisa?
A9: Bubble mukati uye matatu-ply kesi yemapuranga kunze
Q10: Chiratidzo changu chinoshandiswa mukunze, hazvina mvura here?
A10: Zvese zvinhu zvataishandisa ndezve antirust uye zvinotungamirwa mukati mechiratidzo hazvina mvura.
Tsika Neon Led Chiratidzo
Yakatungamira Neon Sign Tsika
Akatungamira Chiratidzo Neon
Neon Yakatungamira Chiratidzo
Neon Chiratidzo Vs Led Sign
Neon Chimiro Led Sign